Imemori ye-USB kunye ne-microSD yazo zonke izinto zeKioxia [UKUHLAZIYA] Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 12/02/2021 22:00 | ngokubanzi, Reviews
Izisombululo zokugcina ziye zakhula ngokumangalisayo, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo iimfuno zabasebenzisi kunye nokukwazi kweefayile zemultimedia ezintsha ngesisombululo se4K esithandwayo. Kungenxa yoko le nto uphawu oludumileyo Kioxia ithathe isigqibo sokuhlaziya uluhlu lwayo lwamakhadi e-MicroSD kunye nezinti ze-USB.
Namhlanje sinetafile yovavanyo imemori ye-U365 ye-USB kunye nekhadi le-Microcer 128 GB ye-MicroSD esuka eKioxia. Fumanisa ukusebenza kwayo kunye nokuba yintoni efanelekileyo kuyo ukwenza imisebenzi yokurekhoda, yokugcina kunye nokudlala kwakhona, ngaloo ndlela uphucula indlela oyila ngayo kunye nokusebenzisa umxholo.
1 I-365GB yeTransMemory U128
I-365GB yeTransMemory U128
Kule meko siqala ngememori ye-Kioxia 128GB ye-USB. Ukuphehlelelwa kutsha kwegama elitsha kunikwa amandla I-32/64/128 kunye ne-256 GB. Ukusetyenziswa kwayo ngokufanelekileyo kukudluliselwa kwedatha kwaye ine-teknoloji ye-USB. 3.2 IGen 1.
Ubungakanani: X x 55,0 21,4 8,5 mm
Ubunzima: I-9 gram
Inethebhu yokuhambisa Oku kuyakusivumela ukuba sigcine i-USB kwaye sikhusele isiphelo ukuphucula ukuzinza kwemveliso. Njengoko bekulindelekile, siyangqinelana neWindows 8 ukuya phambili kunye neMacOS X 10.11 ukubheka phambili.
Thenga iKioxia U365 ukusuka kwi- € 13,30 kwiAmazon
Njengenzuzo, iimveliso zeKioxia zonke zinewaranti yeminyaka emihlanu. Yenziwe ngeplastikhi emnyama ejolise ngokucacileyo kuzinzo. Kwiimvavanyo zethu sifumene ukusebenza kwe-30 MB / s yokubhala malunga ne-180 MB / s yokufunda, Into engentla nkqu nedatha ebonelelwa ngophawu, eqinisekisa ubuncinci i-150 MB / s.
Ngale ndlela, iba yimveliso efanelekileyo yokuhambisa iikopi zethu zokulondoloza okanye ukugcina ubuninzi besibini kwi-PC okanye kwi-Mac yethu. Sivavanye ngokobuqu ukusetyenziswa kokuhambisa iimovie ze-4K ze-HDR, zisivumela ukuba sisasaze ividiyo kwezi mpawu ukuya kuthi ga kwi-30 ye-FPS, ke oko kubonakala njengokukhetha okunokuchaphazeleka okunomdla. Ixabiso layo liza kuba phakathi kwe- $ 20 kunye ne- € 30 kuxhomekeke kwinqanaba lokuthengisa ukuya kuthi ga kwi-256 GB.
Ngoku sijikela kumakhadi e-MicroSD, ngakumbi kwimodeli ye-128GB yoluhlu lwayo oludumileyo lwe-Exceria oluboniswa luhlaza. Njengoko besesitshilo ngaphambili, sinemveliso ye-microSDXC I yeklasi ye-10 U3 (V30) egxile ikakhulu ekurekhodeni kunye Ukudlala ividiyo kwisisombululo se-4K njengoko bekulindelekile. Ke ngoko, iboniswa njengemveliso ekucetyiswa ukuba iselfowuni ephezulu okanye ukurekhoda kunye neekhamera zokufota.
Kule meko, uhlalutyo olwenziwe lubonelele ngeziphumo ezifanayo kwabo babhengezwe luphawu, ukufikelela kwi-85 MB / s yokubhala kunye ne-100 MB / s yokufunda. Oku kuluncedo ngakumbi xa kuziwa ekubuyiseleni kwakhona idatha esiyifakayo ngexesha lokwenyani, zombini ukurekhoda kunye nokuvelisa kwakhona kuye kwathandeka. Kuvavanyo lwethu sisebenzise iDashcam erekhoda kwi-1080p kwi-60FPS kwaye asifumananga ngxaki. Sisebenzise kwakhona i-Xiaomi Mi Action Camera 4K kwaye ihambisane ngempumelelo nedatha ebonelelwa yiKioxia kwi-portal yayo yewebhu ngokufunda nokubhala.
Thenga ikhadi leKioxia microSD
Lilonke siya kuba nakho ukugcina malunga ne-38500 yeefoto, malunga nemizuzu engama-1490 yokurekhoda kwisisombululo I-HD epheleleyo okanye imizuzu engama-314 yokurekhoda kwe-4K. Njengeenkcukacha, eli khadi liyahambelana nazo zonke iimveliso ze-Android, ine-ESD immune, ayinamanzi kunye nobungqina be-X-ray (ayizukuphuka xa ihlaziywa ngale teknoloji). Ngendlela efanayo, inokuthintela ukutshisa kakhulu ukukhusela ukulahleka kwedatha yakho ngenxa yephutha lokushisa kwaye iyamelana nokutshatyalaliswa.
I-HD epheleleyo (21 Mbps)
Akhawunti I-BiCS Flash eqinisekisa ukomelela kwayo kwiikhamera zokujonga kunye needashcams ezihlala zirekhoda kwaye zisusa imixholo yogcino, ukhetho olulungileyo lokwenza iposi yokhuseleko oluzimeleyo.
Njengakwizihlandlo ezingaphambili, Kioxia inikeza le microSD kugcino lwe I-32/64/125 kunye ne-256 GB iyonke, ukuhambelana nezixhobo ezindala zeFAT32.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iinkumbulo ze-USB kunye ne-microSD yazo zonke izinto ezisetyenziswayo zeKioxia [UHLAZIYO]